Xisbiga Dimuquraadiga oo cambaareeyey Agaasimaha FBI-da +VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xisbiga Dimuquraadiga oo cambaareeyey Agaasimaha FBI-da +VIDEO
Hogaanka xisbiga Dimuquraadiga ayaa ku eedeeyey Agaasimaha hay’ada danbi baarista Maraykanka Mr.James Comes inuu wado olole ka dhan ah Murashaxada Xisbigaasi ee Hillary Clinton iyadoo muddo asbuuc ah ay ka hartay doorashada guud ee dalkaasi.
Jimcihii lasoo dhaafay ayuu James Comes sheegay inuu dib u furayo baaritaanka lagu wado Hillary Clinton inay Emailadeeda si khaldan u isticmaashay xiligii ay ahayd Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Maraykanka, arrintaani oo lagu soo beegay iyadoo todobaad kaliya ka harsan tahay codbixinta.
Xisbiga Dimuquraadiga ayaa hada bilaabay olole ka dhan ah Agaasimaha FBI-da oo isagu lagu eedeenayo inuu lugaha la galay arrimaha Siyaasada, halkii laga rabay inuu dhex dhexaad ka ahaado ololeha doorashada.
Dimuquraadiga ayaa ku eedeenaya in FBI-da ay horey xogtan u heysay balse ay la sugeen iyadoo maalmo kaliya ka harsan tahay doorashada, xili Hillary Clinton la saadaalinayey inay ku horeyso cododka. Waxaana su’aalo la iska weydiinayaa in Agaasimaha FBI-da James Comey uu sharciga jabiyey maadaama hay’adaha danbi baarista aysan shaacin xogta la xariirta baaritaanada ay wadaan kahor intaan lasoo afjarin baaritaankaasi.
James Comey ayaa horey uga mid ahaan jiray Xisbiga Jamhuuriga isla markaana horey si toos ah u taageeray Murashaxiintii Jamhuuriga labadii doorasho ee ugu danbeysay arrintaasi oo keenaysa shakiga laga qabo inuu tilaabadan uu qaaday si dadban ugu taageerayo murashaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump oo todobaadyadii lasoo dhaafay fadeexo xoogleh ka heysatay falalkiisa ka dhanka ah haweenka iyo waliba hadalo qalafsan oo uu ku hadlay.
Donald Trump ayaa ka faa’iideystay hadalka kasoo yeeray Agaasimaha FBI-da isagoona durbaba u adeegsaday ololihiisa inuu ku eedeeyo murashaxada la tartameysa ee Hillary Clinton inay sharciga jabisay.